ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ်စဲရေး၊ ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့ရေး အတွက် တနင်္ဂနွေတိုင်း သီချင်းဆိုမည် – Singers’ movement for Kachin State | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုသန်းလွင် - စင်္ကာပူမီးရထား
ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now) - သာသနာရေးဝန်ကြီးသစ်၏ပြောဆိုချက်ကို အစ္စလာမ်အသိုင်းအဝန်း ကန့်ကွက်
တွစ်တာ/Twitter ၀က်ဆိုက် ဟက်ကာတို့၏လက်ချက်မိ
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● စစ်တွေအခြေစိုက် သတင်း သမား အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ်စဲရေး၊ ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့ရေး အတွက် တနင်္ဂနွေတိုင်း သီချင်းဆိုမည် – Singers’ movement for Kachin State
ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲရပ်စဲရေးနှင့် စစ်ဘေးဒဏ်ခံလူထု အတွက် အလှူငွေ ရှာဖွေရေးအတွက် ကိုရဲလွင် ၊ သားထွေး ၊စံလင်း တို့ဦးဆောင်သော အနုပညာရှင်များက တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ လဘက်ရည်ဆိုင်များတွင် လှည့်လည်ဖျော်ဖြေမည်။
ကုသိုလ်ပါဝင်လိုသူ စေတနာရှင် ဂီတမြတ်နိုးသူများအား အသိပေး သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
(မေ ၆ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့)
နံနက် ၈ နာရီ … မောနင်းစတား (တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်)
နံနက် ၉ နာရီ … IT (အလုံ)
နံနက် ၁၀ နာရီ.. စံပြဒေါ်ကြည် (ကီလီ)
8 Responses to ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ်စဲရေး၊ ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့ရေး အတွက် တနင်္ဂနွေတိုင်း သီချင်းဆိုမည် – Singers’ movement for Kachin State
kachin fighter on May 6, 2012 at 3:09 pm
get back all burmese soldiers from kachin land.go back to burma.that is peaceful…
yawna on May 6, 2012 at 6:28 pm
THAT IS GOOD IDEA , I RESPECT THEM .
ct on May 6, 2012 at 6:37 pm
နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတည်ရှိခဲ့သော ဗမာနိုင်ငံတော်၏နေရာတိုင်းမှာ ဗမာစစ်သားများရှိနေ၇မည်
Myutsaw on May 7, 2012 at 9:44 am
ကြေည့်လဲ ဖေါပါ ct ရယ် ဗမာစစ်တပ်ရယ်လိုရှိလာဒါ ဘယ်အချိန်ကလဲဆိုဒါ လူတိုင်းအသိ… ငဖားတွေက လွဲရင်ပေါ့..
NINE NINE on May 6, 2012 at 7:39 pm
Like them, other stars should also do similar things for the public & nation but it’s disgusting some are just showing up like pros.
Awng Dang on May 7, 2012 at 7:31 am
ိနှစ်ပေါင်းထောင်ချီတည်ရှိခဲ့သောဗမာနှိင်ငံမှာ ကချင်ပြည်နေမြေ လုံးဝမပါပါ
Awng Dang on May 7, 2012 at 8:13 am
ဟုတ်ဗျာ….နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတည်ရှိခဲ့သောဗမာနှိင်ငံမှာ တိုင်းရင်သာနေမြေအများစု မပါးဝင်ပါဘူဗျာ
ali armad on May 7, 2012 at 11:32 am
ကချင်ပြည် ကချင်နိုင်ငံ ကတော ပြည်ပကျူးကျော်သူတွေ ရဲ့ စော်ကားမှူးကို ခံနေရပါလား ကိုတော်ရှင်မြတ် ဒဏ်ခတ် ပေးတော်မှူပါ။ အမှန်တရား တွေ ကို ယူဆောင်ခြင်းနှင့်အတူ
ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ပေးစွန်းတော်မှူးပါ။